यस्ता छन् औषधीय महत्व भएका साग र च्याउका फाइदा - Enepali Online
एजेन्सी । हामीले दैनिक सेवन गर्ने तरकारी मात्रा मिलाएर पकाउँदा स्वादिलो मात्र हुँदैन , शरीरलाई स्वस्थ राख्नुका साथै मस्तिष्क पनि बढाउँछ । यसले खाद्य–उपचार (फुड थेरापी) को पनि काम गरिरहेको हुन्छ ।
पोषिलो परिकारले शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाएर क्यान्सर, मुटुरोग र मधुमेहजस्ता असाधारण रोगको सम्भावनासमेत हटाउँछ । त्यसैले औषधीय महत्व भएका सागसब्जीका बारेमा सबैलाई ज्ञान हुनु आवश्यक छ ।
साग र च्याउका फाइदा यस्ता छन् :
नेपालमा रायो, तोरी, फापर, बेथु, मेथी, सौँप, पालुंगो, चौँसुर, छ्यापी, लसुनका सागका साथै फर्सीका मुन्टा, हरियो प्याज, निगुरो आदि हरियो सागको रूपमा खाइन्छ । यी सबै सागमा पाइने पोषक तत्व फरक–फरक छन् । तर, समान रूपमा क्लोरोफिल, भिटामिन, खनिज तत्व पाइन्छन् ।
हरियो सागमा मुटुको रोगदेखि कब्जियतसम्म, पेटको क्यान्सरदेखि गठिया र जोर्नी तथा हड्डीका समस्यासम्म हटाउने क्षमता हुन्छ । मस्तिष्कको क्षमता बढाउन तथा बूढोपनका लक्षण हटाउन सागयुक्त भोजन निकै नै लाभदायक हुन्छ ।
च्याउस् भिटामिन ‘बी’ का विभिन्न प्रकार र खनिज तत्व च्याउमा पाइन्छन् । सेलेनियम, तामा, फस्फोरस, पोटासियम, चिल्लो पदार्थ, कार्बोहाड्रेड भएको च्याउ उच्च कोटिको सब्जी हो । तर, यसमा ऊर्जा स्रोत ९क्यालोरी० अत्यन्त कम हुन्छ । टिपेर जम्मा गरेको च्याउमा अल्ट्राभायोलेट (युभी) किरण दिएपछि भिटामिन डी पर्याप्त बनाउन सकिन्छ ।
संसारमा एक लाख ४० हजार प्रकारका च्याउ पाइन्छन् । तीमध्ये १० प्रतिशत च्याउसँग मात्र मानिसको ज्ञान र पहुँच पुगेको छ । नेपालको कर्णाली क्षेत्रका जंगलमा पाइने मोरेल, गुच्ची नामका च्याउहरू अति महँगा छन् ।
पाउल स्टामेटस् नामक विश्वविख्यात च्याउविज्ञले एक सय प्रजातिका च्याउबारे ६ वटा पुस्तक लेखेका छन् । जसमा उनले च्याउबाट मानव स्वास्थ्यलाई हुने फाइदाका बारेमा अनुसन्धानमूलक विश्लेषण गरेका छन् । सयमध्ये ६ किसिमका च्याउले हाम्रो शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमता अद्भूत तरिकाले बढाउँछ ।
तर, अग्र्यानिक तरिकाले साह्रै सावधानीका साथ फलाइएको च्याउ मात्र खान उनी सल्लाह दिन्छन् । पेन्सिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिनजस्ता एन्टिबायोटिक औषधिहरू च्याउ समूहमा पर्ने विभिन्न फंगीहरूबाट सार निकालिएको कच्चा पदार्थबाट बनाइन्छ ।
उच्च रक्तचाप र शरीरको मोटोपन नियन्त्रण गर्न, हड्डी बलियो बनाउने भिटामिन डी पर्याप्त पाउन, शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउन च्याउ अत्यन्त राम्रो खाद्यवस्तु हो ।
Previous Post Previous post: काठमाडौँको कमलादीमा गोली चल्यो, दुई भारतीय सुटर पक्राउ
Next Post Next post: भारतले नयाँ भाउ पठाएपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढायो
पानीपुरी र चटपटे खाँदै हुनुहुन्छ ? सावधान रहनुहोस तपाइ मृत्युको मुखमा पुर्याउनसक्नुहुन्छ!
पुर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँशक्ती नेपालका संयोजक समेत रहेका बाबुराम भट्टराई वाम गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री! पुरा हेर्नुहोस
गुन्डा नाइके मनोजलाई लाग्यो दुर्गा तिवारीको आमाको श्राप। पूरा भयो नेताहरुको कसम नोट: माथी उल्लेखित भिडियोसँग सम्बन्धित जानकारी विभिन्न सामाजिक संजाल तथा युटुबमा प्रस्तुत भिडियोको आधारमा तयार पारिएको हो। पाठकलाई जानकारी दिने उदेश्यले उक्त भिडियोहरु यहाँ प्रस्तुत गरेका हौ। कुनै पनि भिडियो सम्बन्धि सत्य, तथ्य र यथार्थको लागि सम्बन्धित भिडियो प्रस्तुतकर्तासँग सम्पर्क गर्नुहोला। Sharing is caring!FacebookTwitterGoogle+Pinterest93shares